Maxay ka wadahadleen madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Liibiya? – XAMAR POST
Maxay ka wadahadleen madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Liibiya?
Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo khadka taleefoonka kula xiriiray Madaxweynaha Golaha Madaxtooyada Liibiya Mudane Dr. Maxamed Yuunis Al-Manfi ayaa uga mahadceliyey doorkii uu ka qaatay dib u soo celinta Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xanibnaa gudaha dalka Liibiya, sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya.
Labada Madaxweyne ayaa isla qaadatay adkeynta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya labada shacab ee walaalaha ah iyo iskaashiga labada dowladood ee dhinacyada ammaanka, xasilloonida Mandiqadda iyo la dagaallanka argagixisada iyo Tahriibka.
Dr. Maxamed Al-Manfi ayaa tilmaamay ixtiraamka iyo qadarinta ay shacabka Liibiya u hayaan walaalahooda Soomaaliyeed, isaga oo xoojiyey ballan qaadkiisii ku aaddanaa Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xaniban gudaha dalkiisa.
Sarkaal ka tirsan Booliiska Suudaan oo lagu dilay dibad-baxyada ka socda dalkaasi
Cabdiraxmaan Faroole oo eedeyn u jeediyay Cumar Cabdirashiid